I-Offshore Banking: Kungani abantu abavamile behlela ama-akhawunti asebhange angaphandle
I-Offshore Banking kanye Nokuvikelwa Kwempahla
Kuhle ukucabanga komhlaba njengendawo enomusa lapho ungaze ubhekane nezinkinga zomthetho. Kodwa-ke, uma utadisha izibalo, uzothola ukuthi kunethuba elihle lokuthi ngesinye isikhathi uzobe uvulele icala ezandleni zakho. Ngaphezu koyedwa. Ngokwommeli uJay Mitten, umuntu ojwayelekile eMelika uhlangabezana namacala ayisikhombisa empilweni yakhe yonke. Ngalo, kuza nommeli ongathembekile ongeza uphethiloli futhi wenza amalangabi ezinkinga zakho kube lula.
Lokhu kungenzeka kakhulu kubantu abajwayelekile abanamabhizinisi abo. Ngakho-ke, amacala angalindelekile — mhlawumbe amacebo abambekayo wokuhlwitha ingcebo yakho — angathunyelwa emnyango wakho nganoma yisiphi isikhathi. Yinye into eqinisekile kubantu abaningi. Akukhathalekile ukuthi icala liqhamuka ngebhizinisi noma yindaba yomuntu siqu. Kungaba isehlukaniso, noma kube yindaba yentela. Noma nini lapho ungena enkantolo, ufuna izimpahla zakho, noma okungenani ezinye zazo, zivikeleke. Njengoba kunje, abaningi baphendukela amabhange ase-offshore kuhlanganiswe nethuluzi elifanele lomthetho lokuvikela izimpahla zabo kulezi zingozi ezingezinhle empilweni.
Kungani i-Offshore Banking?
Ngakho-ke, kungani abantu bevula ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle? I-United States kuphela ine-4.2% yabantu emhlabeni. Kodwa-ke, ine-80% yabameli bomhlaba kanye ne-96% yamacala omhlaba. Ngakho-ke, ukuvikelwa kwempahla igama lomdlalo kubantu baseMelika njengoba lokhu kungukusongela okukhulu kwezimali zabo. Iningi labantu elihambisa imali ngaphandle kwezwe ligxile emcabangweni wokuvikelwa kwempahla. Futhi, banomuzwa wokuthi kudingekile ukuvikela izisulu zabo ezingaba sengozini yangakusasa — abakweletisi, abahamba nabadivosa kanye nesehlukaniso. Ukuhlaselwa okuningi kwezomthetho kuvela ngaphakathi kwe-US.
Bajwayele ukusebenzisa ama-akhawunti aphesheya kwezilwandle ukunciphisa izinkokhelo zabo zentela. Le mali itholwa kakhulu evela kwamanye amazwe. I-US intela abantu bayo emholweni womhlaba jikelele. Kodwa-ke, izinkampani ezifana ne-Apple ne-Google zivikela imali phesheya kwezilwandle futhi zijabulela ukonga intela enkulu. Ngokungafani ne-US, amanye amazwe awakhokhisi izakhamizi zawo imali engenayo emhlabeni jikelele. Wonke umuntu ngeke akwazi ukusebenzisa leli thuba, kodwa-ke, funa izeluleko zentela ezinelayisense kuqala. Nakulokhu, ungamane nje wukuyifaka kusungula isu lokuthi "kufanele kube ngale ndlela" engqondweni yakho. Thola izeluleko zentela ezinelayisense.
Kubantu ababamba iqhaza ekuvikelweni kwempahla, bavame ukubeka lezi zimpahla kwesinye sezifunda ezinkulukazi ezimbalwa, ezizimele. Lezi zifunda zithola imakethe yabantu abangaphandle abanesifiso sokulungela izinsiza zamabhange aphesheya kwezilwandle. Iningi lalawa mazwe linemithetho ekhulula izimpahla empahleni. Futhi, ezinye izifunda zinganikela ngendawo enhle yobumfihlo kulabo abatshala imali kula ma-akhawunti. Ngokwemvelo, umthetho ubophezela umuntu ukuba alandele imithetho yezwe lakubo.
Ukuvikelwa kwamafa ase-Offshore
Ukuvikelwa kwempahla kwesinye isikhathi kuthatha amafomu ambalwa. Ngenkathi kunezindlela eziningi zokukhetha i-onshore, izimoto ezingekho phesheya zivame ukusebenza kahle kakhulu kunhloso yokuvikela impahla. Ngokuphawulekile, ama-trust ethekeli lwasolwandle anikela ngamandla onke ekuvikelweni kwempahla. Futhi khumbula, uma uzizwa unecala ngakho konke mayelana nokuthatha le ndlela, musa. Yize kunjalo, yizimpahla zakho esikhuluma ngazo — lezo osebenze kanzima ukuzithola.
Yazi ukuthi okusemqoka, ukuvikela kwempahla akuyona into edlula ukulawulwa kwengozi. Kufana nokuthenga inqubomgomo yomshuwalense; futhi kuvame kakhulu ukuvikela futhi okungabizi kakhulu. Uma wenza ibhizinisi namuhla, khona-ke uyaqonda ukuthi kunzima kanjani ukuthola inzuzo. Ngakho-ke, ukubeka inqaba evikela izithelo zomshikashika wakho nokukusindisa imali kungenzeka kube yicebo lokuhlakanipha.
Uma usebenza ngaphezu kwebhizinisi elilodwa ungafuni ukuthi izicelo ezivela ebhizinisini elilodwa zibeke engcupheni enye. Njengoba kunje, ungahle uthande ukucabanga ngebhizinisi elilodwa ebhizinisini ngalinye. Le ndlela ibeka ibhizinisi ngalinye emgodini wayo we-cubby ngamunye. Ngaleyo ndlela, icala elimelene nebhizinisi elilodwa ngeke lihlukanise wonke umbuso wakho. Ngaphezu kwalokho, ukhulisa amandla wecebo lakho lokuvikela impahla uma wenza njalo phesheya kwezilwandle. Ngakho-ke, yini ongakhetha kukho ekuvikelweni kwempahla yangaphandle?
I-Nevis ne-Asset Protection
INevis ibingenye yezindawo zokuqala ezingasogwini lolwandle ezinsukwini zanamuhla ukunikela ngempahla nokuvikelwa kwempahla. Kuyindlela eyodwa yokuzama nokulinganisa ubungozi bokusebenzisa amabhizinisi amaningi. Izinkampani eNevis nazo zingavimba ukuhlaselwa kwe-sneak okungavela kubameli abangathembekile. Usebenzisa insizakalo yokwakhiwa kwenkampani, njengalena, ungaqala ibhizinisi lokuthengisa kude. Ukuyihlanganisa nethemba elingasogwini kanye / noma isisekelo sogu lolwandle kusuka emikhakheni eyehlukene yomhlaba wonke kungasiza ukunciphisa imikhawulo.
Ochwepheshe bavame ukuncoma amabhizinisi ase-Nevis aphesheya kwezilwandle ngoba imithetho yawo ithanda ubumfihlo nokuvikelwa kwempahla. INevis LLC, njengalo mbhalo, inikezela ngemithetho yokuvikela impahla esebenza ngempumelelo kakhulu kunoma iyiphi inkampani ephesheya kwezilwandle.
Nazi ezinye zezizathu Nevis LLC (ikakhulukazi uma ihlanganiswa ne-Nevis trust) iyithuluzi elihle kakhulu lokuvikela impahla:
Umuntu udinga ukubeka isibopho esingu- $ 100,000 ngaphambi kokufaka isimangalo ukuze aphikise isahlulelo esiphikisana nesifiso sobulungu bakho ku-Nevis LLC.
Ukudluliselwa kwenkohliso Isilinganiso semikhawulo yiminyaka emibili nje. Lokho kusho ukuthi uma ufaka izimpahla ku-Nevis LLC, ngemuva kweminyaka emibili, uNevis izinkantolo ngeke zilalele icala.
Phezu kwalokhu, okweletwayo kudingeka afakazele ngale kokungabaza okungenangqondo umnikazi weNevis LLC exhase i-LLC ukugcina izimpahla ezivela kulowo obolekayo.
Ukuvikelwa kwempahla okugcina ukuthi okweletwayo angabambi inkampani noma izimpahla eziphethwe zinikezwa ilungu elilodwa-elilodwa ngokungezelela kuma-LLC angamalungu amaningi.
Noma umuntu ethola i-oda yokushaja, iphelelwa yisikhathi eminyakeni emithathu kanti okweletwayo akakwazi ukukuvuselela.
Ngamandla amakhulu kuneNevis LLC ukuvikelwa kwempahla yeNevis. Ukubeka ngamagama anamandla, i- I-Nevis ithemba ingenye yamathuluzi asebenza ngempumelelo kakhulu emhlabeni wokuvikela impahla. Lapho inkantolo yase-US ithi "buyisela imali" umphathi ophethe phesheya uthi, "uxolo, awunawo amandla lapha." Lapho sisungula i-Nevis LLC sifaka i-Nevis LLC ngaphakathi. Ngaleyo ndlela, iklayenti lingumphathi we-LLC lapho izikhathi zinhle. Lapho-ke esehlaselwa ngokuhlaselwa okungokomthetho, umphathiswa (inkampani yethu yezomthetho eNevis) angangena futhi asebenze inqaba yokuvikela impahla.
I-Belize ne-Asset Protection
I-Belize inikeza ukwakhiwa kwezinkampani ezingaphesheya kwezilwandle kanye namabhange aphesheya kwezilwandle. Ngemuva kweNevis, kungenye yezinketho ezingcono zokuvikelwa kwempahla nobumfihlo. "IBelize ingelinye lamazwe ebengingahamba ngiyofihla imali yami futhi ngiphile uma kufanele," kusho uDennis Lormel, owayengumphathi weFBI's Crimes Section. "Iqiniso ukuthi ngizovikelwa laphaya, futhi uhulumeni wase-US ngeke akwazi ukungifaka noma ukungena kuma-akhawunti ami asebhange." Ngokweqiniso, kunconyelwa ukuthi usebenzise i-banking phesheya kwezilwandle. ngenye yezinhloso eziningi ezisemthethweni, ezingokomthetho.
Ngemuva kukaNevis, wena I-Belize LDC kuhlanganiswe ne Belize trust zingamathuluzi amabili okuvikela impahla anamandla emhlabeni wonke. Nasi isizathu.
Iminikelo eyimali (imali enikelwe ekusunguleni i-LDC) ayikhishwa kwisimangalo sokudluliselwa ngenkohliso kombolekisi.
Isilinganiso semikhawulo ekuhanjisweni okukhohlisayo kwe-Belize LDC sifushane kakhulu. Kungunyaka owodwa kuphela ukusuka ekusungulweni kwawo futhi waxhaswa noma iminyaka emibili kuphela kusukela ngesikhathi impahla idluliselwa kukho.
I-Belize trust inezinzuzo ezifanayo futhi inamandla kakhulu kune-LDC. Imvamisa sakha ukwethenjwa kweBelie nge-Belize LDC ngaphakathi. NjengaseNevis LLC, iklayenti lingumphathi weBelize LDC kuze kwenzeke “into embi”. Lapho umuntu okweletwayo ehlasela, abaseBelize trustee bangena futhi bavikele impahla. Izinkantolo zakho zasekhaya azinalo igunya phezu kwama-Belize trustee. Ngakho-ke, abakwazi ukuphoqa abaphathi ukuthi bahambisane.
Isilinganiso sokukhawulelwa kokudluliselwa ngenkohliso kwe-Belize trust kusifishane. Ngokuqhubeka kwesehlukaniso noma ifa lifuna ukuthi umthetho wokulinganiselwa ungabi ngu-zero. Okusho ukuthi, lapho umuntu edlulisela leyo mpahla ethembeni, ukuthembela kuyazivikela.
Ukusekela Impahla Yakho
Ukuze ufake amafa akho kwizimangalo zommeli ezingalungile, kuzodingeka ukuthi uhlole ubungozi bakho kanye nenani nohlobo lwefa lakho. Ukuhlelwa kwezezimali phesheya kwezilwandle kunikeza uhla olukhulu lokukhetha okungatholakali ngaphakathi. Okokuqala, ngaphambi kokuqala noma yikuphi ukuhlela okuthuthukile kokuvikela izimpahla zakho, nakhu okufanele ukwenze. Okokuqala, kumele uqinisekise ukuthi unesisekelo esikhulu sokuqina kwempahla esiqinile.
Empeleni, kufanele ubeke impahla kumathuluzi afanele asemthethweni. Ngaphezu kwalokho, kufanele ukhethe amandla afanele ukuze uthole isivikelo osifunayo. Ungahlukanisa amafa akho kulawa mathuluzi asemthethweni emabhange akhiwe ezindaweni ezingazihloniphi izinqumo zakwamanye amazwe. Kuqondile kahle futhi kuyashesha ukusungula. Ngaphezu kwalokho, ngokwenza njalo ungavikela impahla yakho nobunikazi bakho lapho uqhuba ibhizinisi emhlabeni jikelele. Sazise ukuthi lezi yizifiso zakho futhi sizokukhombisa ukuthi kanjani.
The I-Cook Islands iyakuthemba or I-Nevis ithemba kuhlanganiswe ne-offshore LLC ngaphakathi kwe-trust kuyinhlanganisela enhle. Njengoba kushiwo ngenhla, lapho izinkantolo zase-US zifuna ukuthi ubuyise imali, inkampani yethu yezomthetho yangaphesheya ingenqaba ukulandela.
Izinkampani ze-Shadow for Protection Financial
Ngokuthakazelisayo, i-Tribune-Review yaphawula ukuthi cishe amaphesenti angamashumi amahlanu ezentengiselwano zomhlaba wonke enza indlela yokuhamba ngezintela. Enye indlela yokufinyelela intela yebhange lase-offshore ukuthola i-akhawunti yasebhange yangasese egameni lenkampani. Njengalokhu, ivikela imali cishe noma ubani ofuna ukuyigcina imali. Lokhu kungabandakanya ababolekisi, abameli, abashade nabo, noma ezinye izindleko zemali.
"Ukuba nenkampani engaziwa kusizakala kakhulu emisebenzini ehlukahlukene ... ukuthola inkampani engaziwa kulula kakhulu," kusho uJason Sharman, wezifundo zasebhange lolwandle e-Griffith University e-Australia. Ukwenza inkampani kungashesha futhi kube lula. Eqinisweni, lokhu kuyinto yethu ekhethekile futhi phakathi nezinsuku zomsebenzi, izinkampani zethu eziqinile zakha izinkampani ezingasolwandle nsuku zonke. Ukuthola i-akhawunti yasebhange engaphesheya kwenkampani yakho engaphesheya kungathatha isikhathi esithe xaxa nomzamo. Ngakho-ke thola usizo kumuntu onolwazi embonini. Futhi, le yinto futhi esiyenza nsuku zonke - ukusiza amaklayenti ukuvula ama-akhawunti aphesheya kwezilwandle. Lapho wenza okufanayo, cishe uyokuthola kukufanele kakhulu maqondana nokuzivikela ekuhlaselweni kwezezimali.
Amanye ama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle adinga nje izinkulungwane zamaRandi ambalwa ngokufaka imali yokuvula. Abanye, ikakhulukazi i-akhawunti yasebhange laseSwitzerland, badinga inani elifanele lemali okufanele balikhokhele. Ibhange laseSwitzerland kuvame ukudinga kusuka ku- $ 250,000 kuya ku- $ 1 wezigidi ukuvula i-akhawunti.
Ama-Trustees ase-Offshore we-Asset Protection
Ukuhlelwa kokuvikelwa kwempahla okungekho phesheya sekuyindaba yezimpikiswano eminyakeni embalwa edlule. Uhlelo oluhle kakhulu lokuvikelwa kwempahla ukwenza ukwethenjwa okungenakuphikwa kube namandla akhethekile wokuqokwa. Lokhu kungenxa yokuthi umthetho awubheki impahla ethembekile njengempahla ye-Settlor. Khumbula, lapho uthenga i-trust, awugcini ngokuthenga i-trust. Ngaphezu kwalokho, uthenga okuhlangenwe nakho kokubhalwa kwethembekile.
Ukuze uvikele wena, uchwepheshe kufanele awuqambe ngendlela efanelekile ngokusekelwe kokubumbeni nakwisipiliyoni sangempela somthetho wamacala. Ngakho-ke, lokhu akuyona into ngokwakho. Thola usizo. Ngemuva kwakho konke lokhu, yimali yakho. Kunezindlela eziningi zokuthembela. Uhlobo ngalunye lunezinhloso noma izinhloso ezihlukile.
Ukuphatha ukuthembela kude nolwandle kungenzeka kube inketho yakho enhle maqondana nokuvikela izimpahla zakho. Eqinisweni, sithole ukuthembela kude nolwandle ithuluzi elinamandla kunazo zonke elikhona.
Abantu basebenzisa ama-trust aselwandle kude nokungaphezulu kokugwema umuntu obolekayo ojwayelekile. Isibonelo, bakwenzela umuntu ofuna ukuqothula umcebo wakhe ecaleni lesinxephezelo sabasebenzi. Singaphinde sizisebenzise ukuvikela impahla yakho kubameli abangathembekile abambelekela engozini yemoto, umlilo olimaza kakhulu kunezivikeli zomshuwalense, njll.
Njengakwezinye izindlela zokuvikela impahla, kungcono ukubeka ithemba ngaphambi kokuqhamuka necala. Ngaleyo ndlela, ikwazi ukukuvikela kangcono. Yebo, ungayisebenzisa njengenqaba yangemva kwecala. Kepha ukuhlela kwangaphambili kuhle. Ukuthenjwa okukude nolwandle, ngale njongo, kuklanyelwe njengethembe lokuvikelwa kwempahla. Okusho ukuthi, injongo yokugcina ukuqapha izimpahla zakho.
Ngenkathi amatrasti aphesheya kwezilwandle anganikeza ngamathuba wokuhlela ukuvikelwa kwempahla, kufanele usondele kule ndlela ngokuhlakanipha. Udinga ukuthi uqiniseke ukuthi umhlinzeki wakho unesipiliyoni futhi uhlunga ukuthembeka kahle. Futhi, inhlangano enobudlelwano obude ne-trustee kufanele iqondise ukudala kwayo.
Ukudlulisela impahla ngaphandle kwe-USA kube yithemba lomhlaba wonke ukuvikela okweletwayo okhona ukuthi aqoqe kungenzeka kube ukuthutha ngobuqili. Kodwa-ke, lokhu kumane kuyindaba yomphakathi ngokuvamile engenayo imiphumela yobugebengu. Igama elingcono laleli binzana lithi "ukuthengiselana okwenzakalayo." Eqinisweni, leli ibinzana eliqondile esetshenziswa i-Uniform Law Commission manje. Lokhu kungenxa yokuthi izwi ukukhwabanisa kuvame ukuholela abangafundile ekucabangeni okukubi kakhulu kunalokho okuyikho ngempela.
Imithetho Yentela yase-Offshore Banking
Ngokuyisisekelo, kukhona ukubanjwa okukodwa okunalezi zinhlobo zama-akhawunti wokutshala imali kude nolwandle. Lokho ukwenza isiqiniseko sokulandela imithetho yase-United States "yokungakhokhiswa intela". Le mithetho ifaka ukuqiniseka ukwenza izinto ezifana:
Ukubika noma yikuphi okuthengiswayo okudluliselwa kwi-trust yangaphandle ku-IRS.
Ukuhanjiswa okuvela kunokwethenjwa kude nolwandle okutholwe ngumMelika kungakhokhiswa intela kulowo muntu.
Yonke imali engakhiswanga ingabanjiswa intela njengemali engenayo.
I-akhawunti yanoma iyiphi imali etholakele ethembeni elingasogwini okungenzeka ukuthi ikhiqizwe eminyakeni edlule. Ngaphandle kwalokho, ukusatshalaliswa kungenza amaMelika akhokhe intela yemali kuleyo minyaka. Lokhu kufana nokuthi ngabe yimali etholwe eminyakeni edlule. Uma imali engenayo ingabikwanga ngaphambili, ungacelwa ukuthi ukhokhele izinhlawulo zombili nenzalo. Iqiniso ukuthi imali etholwa phesheya ayithathi hlangothi. Awukhokhi izintela ezingaphezulu noma ngaphansi uma ubamba imali yakho kude nolwandle noma u-onshore.
Abakwa-IRS bazokucela (noma i-CPA yakho) ukuthi ufaye ifomu elilula lentela. Ifomu licacisa inani lezimpahla ezingaphakathi kwe-trust. Ngaphezu kwalokho, uzobiza amagama abazuzayo ngokwethenjwa. Uma wehluleka ukufaka lo mbiko ungathola inhlawulo, phakathi kwezinye izinto, imali ebambezekile ye- $ 10,000. Uma wehluleka ukufaka lo mbiko ngokuphelele, kungaqina kakhulu. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi i-accountant yakho igcwalisa bese ufayela amafomu alula ngesikhathi.
Ngamanye amagama, i-IRS ayinendaba uma une-akhawunti engaphesheya. Ukuba ne-akhawunti engaphesheya akwenzi “amafulegi abomvu,” njengoba abanye bekholelwa ngokungafanele. Banendaba kuphela ukuthi ubika iholo lakho. Noma ngabe uhola inzuzo ngaselwandle noma phesheya kwezilwandle, bika lokho okutholayo. Ngakho-ke, akulona olwandle noma olwandle olungabalulekile ku-IRS. Kubikwa ukuthi iholo lakho libalulekile, noma ngabe leyoholo yenzeka kuphi.
Amathiphu wentela we-Offshore Corporate and Trust
Kukhona amathiphu athile abalulekile wentela okufanele uwaqaphele njengokunikeza usizo, ukudlulisela, noma ukwenza impahla yangaphandle. Lezo zinto ezihambisa impahla ziye ethembeni lakwamanye amazwe kanye nalabo abahlomula nge-US kwamanye amazwe kufanele bazi lolu lwazi olulandelayo. Ngokufanayo, uma ubamba impahla yakho yakwamanye amazwe njengenkampani yamanye amazwe, kunezinye izinto okudingeka uzazi. Ngokuqondile, thatha isenzo esifanele uma ungena kunoma yisiphi isigaba esingezansi:
Ungumnikazi wamasheya ophethwe i-10% noma ngaphezulu inkampani engaphesheya kwezilwandle. Futhi, ngaphezu kwesigamu sesitoko senhlangano sinabanikazi abahlanu noma abambalwa baseMelika.
Abantu baseMelika abahlanu noma ngaphansi bayabandakanyeka kwisitokhwe senkampani yakho engaphesheya kwezilwandle. Ngaphezu kwalokho, i-60% nangaphezulu kwemali etholwa yinkampani ivela ekutshalweni kwemali.
Unokulawula okwabiwayo kwe-an inkampani yase-offshore ukubamba i-50% noma ngaphezulu kwezimpahla njengezimpahla zokutshala. Ngaphezu kwalokho, wenza i-75% nangaphezulu kwemali engenayo engenayo efanayo yokutshala imali.
Ngabe kukhona okungenhla okuyiqiniso? Uma kunjalo, kufanele uqiniseke ukuthi ubika imali engenayo embuyiseleni yakho yentela yomuntu siqu. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uthintana ne-CPA enolwazi nezinhlaka zamazwe omhlaba. Iningi lama-CPA anolwazi kule nkundla avela emadolobheni amakhulu anenqwaba yabantu abacebile. I-CPA yangakini enobungane evela eBugtussle, iKentucky kungenzeka ibe ngaphezulu kwekhanda lakhe. Usengasebenzisa i-guy yakho yasendaweni noma i-gal ukuhlunga kwakho okuyisisekelo. Kepha ukuhlunga okuvela phesheya, thola umuntu owaziyo umkhawulo.
Ngokusobala, kufanele usethe i-trust yezokuvikela impahla ye-offshore amehlo akho avuleke kakhulu. Inikeza indlela yokubeka izimpahla zakho ngaphezu kokufinyelela kwabakweletwayo. Ngakho-ke, ngokuhlela okuhle, nokuqonda imidwebo yentela ngayinye, ungenza izinto ngokulungile. Futhi, ungafihla izimpahla zakho kubameli abangathembekile. Vele uqiniseke, kunezindlela ezisebenzayo nezinamandla zokuzivikela engozini engokomthetho. Baningi abanye abantu abavamile abakwenzayo nsuku zonke.
UDkt Kristy Nelson